जर्जर बन्यो देशकै पहिलो विज्ञान क्याम्पस- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — अमृत साइन्स क्याम्पस (अस्कल) देशको पहिलो विज्ञान विषय अध्ययन गराउने क्याम्पस हो । विज्ञान विषयमात्र पढाइने यो देशको एउटा मात्रै क्याम्पस पनि हो । यो क्याम्पस २०१३ साल असोज १ गते स्थापना भएको हो । हाल क्याम्पस स्थापना भएको ६५ औं वर्ष पुगेको छ ।काठमाडौंको सोह्रखुट्टे–लैनचौर सडकको लगभगबीच भागमा स्थित अस्कल । यस क्याम्पसको पछाडी भने ठमेल क्षेत्र पर्छ । नेपालको शिक्षा व्यापारमूखि हुनु अघि यो क्याम्पसको महिमा कस्तो थियो भनेर बयान गर्न पनि कठिन हुन्छ ।
अस्कलको शान भनेकै यहाँबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरू हुन् । यहाँ पढेकाहरू देशका ख्यातिप्राप्त डाक्टर, इन्जिनियर, नेताहरू छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्वविज्ञान मन्त्री गणेश साह, राप्रपा नेता कमल थापा, डा. उपेन्द्र देवकोटा (स्वर्गीय)लगायत देशले मात्रै होइन विश्वले नै मानेका चिकित्सक, इन्जिनियर, पाइलट, प्राध्यापकहरू यही क्याम्पसका पूर्वविद्यार्थी हुन् ।नेपालमा विज्ञान विषयको उच्च अध्ययन भन्ने बित्तिकै सबैले आदर पूर्वक सम्झने नाम थियो अस्कल । मानव सभ्यतालाई आधुनिक विश्वसँग जोड्ने शिक्षा नै प्राकृतिक विज्ञान विषय हो । अत्याधुनिक विकासका लागि विज्ञान महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, त्यही क्याम्पसमा विज्ञान पढेर ‘विश्व विज्ञान’ बुझेकाहरुका लागि अहिले यो क्याम्पसर खण्डहरभन्दा फरक छैन ।
विगत ९ वर्षदेखि असोज १ गते अस्कल स्थापना दिवस पारेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा पूर्व विद्यार्थी बाबुराम भट्टराईले ‘राष्ट्रिय विज्ञान दिवस’ मनाउने निर्णय गराएका थिए । खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रहँदा ‘राष्ट्रिय विज्ञान दिवस’ मनाउन थालियो । तर, राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको मुख्य स्मारकको वास्तविक अवस्था भने दयनीय छ । विज्ञान प्रविधिको युगमा विज्ञान विषयको मन्दिर जिर्ण र अस्तव्यस्त हुँदा पनि कसैको ध्यान पुगेको छैन ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो पटक नवौं विज्ञान दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ । तर, त्यो सन्देश अस्कलसम्म भने पुगेको छैन । पुगेकै भए पनि औपचारिकतामात्रै सीमित हुनेछ ।
आश्विन ३, २०७८ कुशल तिमल्सिना, दीपक परियार
पोखरा — ‘ए’ डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा शनिबार धरानको राइजिङ क्लब र घरेलु टोली स्पोर्ट्स क्यासलले विजयी सुरुआत गरेका छन् । पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरी आयोजित प्रतियोगिताको उद्घाटन गण्डकी प्रदेशका खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङले गरेका थिए ।
सामान्यतः काठमाडौंकेन्द्रित फुटसल गतिविधि हुने नेपालमा पूर्वाञ्चलबाट उदाएको राइजिङ युथ क्लबले पोखरामा शनिबार सनसनी मच्चायो । पछि परेको स्थितिबाट पुनरागमन गरी राइजिङले काठमाडौंको स्काइ गोल्सलाई ५–४ गोलले हरायो ।
राइजिङका प्रशिक्षक युवेन्द्र गुरुङ आफ्ना खेलाडीले राइजिङ टिमको हैसियतमा प्रदर्शन गरेकामा सन्तुष्ट देखिए । उनले खेलपछि कान्तिपुरसँग भने, ‘पूर्वाञ्चलमै यो स्तरको फिल्ड हामीसँग थिएन । मैले नै खेलाडीको मनोबल बढाउँदै यहाँसम्म ल्याएको थिएँ । पोखरा आएपछि हामीले दुई दिन गरेर चार घण्टा म्याटमा प्रशिक्षण गर्न पाएका थियौं । मेरा खेलाडीले जस्तो जोस देखाए, त्यसबाट म पूर्ण सन्तुष्ट छु ।’ उनले खेलबाट विपक्षी टोलीलाई राइजिङसँग खेल्न दबाब पर्ने भएकाले सहज हुने अपेक्षा गरे । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा खेलस्थल सबै टोलीका लागि नयाँ थियो । उद्घाटन खेलको पहिलो हाफमा राइजिङ र स्काइ गोल्स दुवैका खेलाडीलाई सन्तुलन मिलाउन हम्मेहम्मे परेको थियो । पहिलो हाफमा अला (मिडफिल्डर) श्रीकृष्ण श्रेष्ठको गोलमार्फत चक्रपथ भाटभटेनीको स्काइ गोल्सले अग्रता बनायो ।
आक्रामक रणनीतिसहित दोस्रो हाफमा फर्किएको राइजिङ सुरुआती दुई मिनेटभित्रै तीन गोल गरी खेलमा आफ्नो पकड जमाउन सफल रहयो । त्यसपछि टोलीले कहिल्यै पछाडि फर्कनुपरेन । २१ औं मिनेटमा फिक्सो (डिफेन्डर) दोर्जे तामाङले गोल गर्दा २२ औं मिनेटमा अला मिलन लिम्बु र सुदीप गुरुङले गोल गरे । २५ औं मिनेटमा पिभोट रेवश मास्केले राइजिङबाट चौथो गोल गरे । एक मिनेटपछि नै आशिष सुनामको गोलमार्फत स्काइ गोल्सले अन्तर कम गरेको थियो । ३० औं मिनेटमा स्काइका श्रीकृष्णले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि खेल ४–३ को स्थितिमा आयो । ३२ औं मिनेटमा रेवशले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा राइजिङले अग्रता फराकिलो बनायो । त्यसको तीन मिनेटपछि श्रीकृष्णले व्यक्तिगत ह्याट्रिक पूरा गरे । त्यसपछि गोल हुन नसक्दा उनले टिमलाई जित वा बराबरीमा लैजान सकेनन् ।
गोलपछि राइजिङ क्लब धरानका खेलाडी (दायाँ) तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर
स्काइ गोल्सका फिक्सो तथा स्टार फुटबलर अमित तामाङले टिमबीच सन्तुलन नमिल्दा हार बेहोर्नुपरेको स्वीकारे । ‘धेरैपछि रियल टर्फमा खेल्न पाउँदा अलि अप्ठेरो भएको थियो । हामीबीच पनि सन्तुलन भएन,’ दोस्रो हाफमा लगातार गोल खानुपरेकोबारे अमितले भने, ‘सुरुमा हामीले आफ्नै गल्तीले गोल खान पुग्यौं । त्यसपछि हामी काउन्टरमा जान थाल्यौं । अनि हाम्रो तालमेल मिलेन ।’
स्काइका प्रशिक्षक रमेश सिन्केमानले पनि आफ्ना खेलाडीबीच तालमेल नमिल्दा हार बेहोर्नुपरेको बताए । ‘टिममा खेलाडीले आफ्नो जिम्मेबारी बुझेनन् । टर्फमा हाम्रा लागि नयाँ अनुभव थियो,’ उनले भने, ‘यो लिगमा सबै टिम उत्तिकै स्तरका छन् । सबैले सबैलाई हराउन सक्छन् । आगामी खेलमा हामी आक्रामक रणनीति बनाउनेछौं ।’
क्यासलको एकपक्षीय खेल
स्पोर्ट्स क्यासल पोखराले गत चैतमा सम्पन्न छनोट प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेश च्याम्पियन हुँदै आफ्नो प्रभाव प्रदर्शन गरिसकेको थियो । पहिलो खेलमै क्यासलले काठमाडौंको प्रभातफेरीमाथि ७–० को एकपक्षीय जित निकाल्यो । घरेलु दर्शकको साथ पाएको क्यासलले सुरुदेखि नै आक्रामक फुटसल खेलेको थियो । सातौं मिनेटभित्रै क्यासलले ३ गोलको अग्रता बनाएको थियो । अला सुमित श्रेष्ठले तेस्रो, पिभोट खिमराज गुरुङले छैटौं र अला विजय गुरुङले सातौं मिनेटमा गोल गरेका हुन् ।
दोस्रो हाफमा क्यासलले ४ गोल थप्यो । पिभोट खिमराजले पहिलो मिनेटमै व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे । २४ औं मिनेटमा अला सुमितले पनि व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा त्यसको एक मिनेटपछि फिक्सो दिपेश घलेले गोल गरे । पिभोट किशोर गुरुङले ३४ औं मिनेटमा सातौं गोल गरेका थिए । पिभोट खिमराजलाई खेलमा ह्याट्रिक गर्ने अवसर थियो । तर उनी पेनाल्टी प्रहारमा चुके । फुटसलको नियमअनुसार एक टोलीले ६ वटा फाउल गरेपछि विपक्षी टोलीलाई १० मिटरबाट पेनाल्टीको अवसर हुन्छ । प्रभातफेरीले ६ फाउल गरेपछि पाएको पेनाल्टीमा खिमको प्रहार गोलरक्षक आशिष दंगालले रोकेका थिए ।
फुटसलको नियमबारे जानकार नहुँदा खेलाडीहरू केही अन्यौलमा परेको देखिए । पहिलो हाफमा क्यासलका उज्वल शाहीले गोलरक्षक विश्वास पौडेललाई ब्याकपास दिँदा रेफ्रीले फाउल लिएर विपक्षीलाई इनडाइरेक्ट फ्रिकिकको अवसर दिएका थिए ।
क्यासलका सहायक प्रशिक्षक अर्विन गुरुङले आफ्ना खेलाडीहरूले शतप्रतिशत प्रदर्शन गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘खेलाडीको मिहिनेतबाट नै यो सम्भव भएको हो । उनीहरूले शतप्रतिशत खेले । प्रशिक्षणमा जे सिकेका थिए । त्यही नै प्रदर्शन गर्दा हामीलाई सहज भएको हो,’ उनले थपे, ‘हामीले पोखरामै म्याट विछ्याइएको मैदानमा प्रशिक्षण गर्न पाएका थियौं । सानो फिल्ड थियो तर त्यसले हामीलाई धेरै नै फाइदा दिलायो ।’ प्रतियोगिताका लागि स्पोर्टस क्यासलले ३ महिनादेखि प्रशिक्षण गरिरहेको थियो ।
प्रभातफेरीका प्रशिक्षक सरोज थापाले भने आफ्नै खेलाडीको गल्तीका कारण हार बेहोर्नुपरेको स्वीकारे । तर टिमको क्षमता र सन्तुलनमा कमी नआएको दाबी गर्दै उनले आगामी खेलमा नयाँ रणनीतिसाथ अगाडि बढ्ने बताए । ‘हामीले कहिल्यै पनि यस्तो म्याटमा प्रशिक्षण गरेका थिएनौं । काठमाडौंमा सानो मैदानमा प्रशिक्षण गरेका थियौं । यहाँ ठूलो मैदान थियो । त्यसमाथि घरेलु दर्शकसामु उनीहरू धेरै नै आक्रामक देखिए,’ प्रशिक्षक थापाले भने, ‘शारीरिक रूपमा पनि हाम्रा खेलाडीहरू कमजोर देखिएको हो । हामीले आक्रामक नै राणनीति बनाएका थियौं । तर सबै पोजिसनमा राम्रो खेल भएन । पहिलो हाफको तीनवटै गोल आफ्नै गल्तीले खाएका थियौं । त्यसयता पछि परिरह्यौं । यो पहिलो खेलबाट हामीले धेरै कुरा सिकेका छौं । खेलको हिसाबमा मलाई यो नजिताले धेरै दुःख छैन । अर्को खेलमा हामी राम्रो प्रदर्शन गर्नेछौं ।’